कमेडी च्याम्पियनबाट फालिएकी नारियाले रमेश उप्रेतीसँग बसेर नाच्दा ‘बस्दा त मेरो देखिन्छ’ भनेको भिडियो भाइरल – Gazabkonews
कमेडी च्याम्पियनबाट फालिएकी नारियाले रमेश उप्रेतीसँग बसेर नाच्दा ‘बस्दा त मेरो देखिन्छ’ भनेको भिडियो भाइरल
कमेडी च्याम्पियनबाट फालिएकी नारियाले रमेश उप्रेतीसँग बसेर नाच्दा बस्दा त मेरो देखिन्छ भनेको भिडियो भाइरल, त्यस्तो अ श्लि ल शब्द कति नअड्कली बोलीन् त नारियाले ? नारियाले बोलेको शब्द किन काटिएन इडिटमा ? त्यस्तो शब्द बोल्दा अध्यक्ष भनिएकी करिश्मा, गेष्ट रमेश उप्रेती, विपना थापा, संचालन मुन्द्रे त्यसरी किन हाँसेर खिल्ली उडाए ? विबादमा तानिएको मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा नारियाले बस्दा त मेरो देखिन्छ भनेको भिडियो हेर्नुहोस्
बेलायती सेनामा कार्यरत ताप्लेजुङका मण्डल थेबेलाई देख्दा जो कोही दंग पर्छन । कारण हो उनका सुगठित हात पाखुरा र लोभलाग्दो शरीर । चट्ट मिलेको जिउडाल हेर्दा जसले पनि सैनिकको हुलिया भएको ठम्याउने ३१ वर्षको लक्का जवान मण्डल अहिले बेलायती सेना बाहेक मोडलको परिचय समेत बनाएका छन् ।नेपाली सेनाको छँदा खाँदाको जागिर छाडेर बेलायती सेनामा भर्ती हुँदा बाबुले देश छोड्यो भनेर रोएका मण्डलका बाबु आमाका आँखामा अहिले न गरिबीको पिडा छ नत छोरो टाढा भएकोमा पहिला जस्तो सुर्ता ।
बेलायती सेनका आर्मी छोरालाई अहिले बाआमाले घर गाउँमा नै बसेर म्यूजिक भिडियोको हिरोको रुपमा देख्न पाउँदा बाआमाका आँखामा खुशी छन् । सानै उमेरदेखि कलाकारितामा झुकाव भएकाले अवसर पाएसम्म समय मिलाएर कलाकारितामा निरन्तर दिने मोडल थेवेले बताए।मण्डलले गायिका पारु राईएको तिम्रो तृष्णामा अभिनय गरेर आफ्ना कला कौशल देखाएका छन् । पारु र भ्वाइस अफ नेपालका फाइनलिष्ट विकास लिम्बूको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा मण्डलसँग सुन्दरी पारुको अनस्क्रिन रोमान्स रहेको छ । बेलायत र नेपालका विभिन्न सुन्दर तथा रमणीय स्थानमा छायांकन गरिएको भिडियोमा छांयाकन, सम्पादन एवं निर्देशन सञ्चारकर्मी कुशल श्रेष्ठले गरेका छन्। नेपालतर्फ सुरज तामाङले निर्देशन गरेका हुन्।
भिडियोमा करिब डेढ दशक यता ब्रिटिश गोर्खा सेनामा सेवारत साथै सामाजिक अभियन्ता मण्डल थेवे र पारु राईका अलावा विकाश लिम्बू र वृक्षा लिम्बूले अभिनय गरेका छन्। भिडियोमा मेकअप बिपना गुरुङ, सह–छांयाकन आशिष श्रेष्ठ र रंग संयोजन नवीन निरौलाको रहेको छ।नेपाल छँदै संगीतको आधारभूत शिक्षा लिइसकेकी गायिका राईले प्रवासमा रहेर आफूलाई मन पर्ने पेसा अंगाल्नका लागि सोचे जस्तो सहज नभएको बताइन्। पाँचथरमा जन्मिएकी र हाल बेलायतमा पल्टने जीवन बिताइरहेकी पारु राई करिब एक दशकदेखि बेलायतमै बस्दै आएकी छन्।
मैले उसलाई आरआर क्याम्पसको गेटमै उन्नती बुक हाउस अगाडि पहिलोपटक भेटेको थिएँ। एक्कासी ठोक्किँदा ‘साले’ भन्दै उसले मलाई एक थप्पड लगाएकी थिई। एक अन्जान छोरीमान्छेबाट बिना गल्ती थप्पड खाँदा म लाज र रिस दुवैले रातोपिरो भएपनि केही नभएझैँ ‘सरी’ भनेर क्याम्पस गेटभित्र छिरेको थिएँ।आज फर्केर हेर्दा त्यस दिन सरी भनेकोमा नमज्जा लाग्छ। सायद बिना गल्ती मागिएका माफीहरुमा मानिस सधैं पछुतो मान्छ। तर आज पनि त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ उसँग।हुन त आजकल ऊ मेरो साथी हो। संसार अनौठो छ, कुनै दिनमा दुश्मनजस्तो भेषमा भेटिएकाहरु अर्को दिन साथीको रुपमा कायापलट हुन्छन्। मेरो हकमा पनि त्यही भयो। थप्पड खाएकै दिन ऊ मेरो साथी बन्न पुगी।
त्यो दिन ०७३ सालको कुनै एक बिहान थियो। म पत्रकारितामा मास्टर्स गर्छु भनेर पूर्वी नेपालबाट काठमाडौँ छिरेको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो म केही नभएपनि नेपालको नाम चलेको पत्रिकाको पत्रकार अवश्य बन्नेछु।त्यो सायद पहिलो सेमेस्टरको पहिलो क्लास थियो, मलाई गेटमै ठूलो झड्का मिलिसकेको थियो। मास्टर्स पढ्दा स्कुलमा झैँ हाजिर गर्ने चलन रहेछ।सरले हाजिर गर्न सुरु गर्नुभयो र एकछिनपछि मेरो नाम माधब पौडेल भनेर बोलाउनु भयो। ‘एस सर’ भनेलगत्तै अर्को नाम सुनेँ ‘प्रेमिका गुरुङ।’ नाम अनौठो लाग्यो, हाँसउठ्ने खालको। को रहेछ भनेर फर्केर हेर्दा मलाई थप्पड हान्ने पो रहिछ। मलाई उकुसमुकुस भयो, अरु सबै विस्तारै मुस्कुराए म भने सिधा हेर्न पनि सकिनँ। क्लास सिद्धेपछि सुरुआती कक्षा भएर होला हामी अपरिचितहरु एकअर्कासँग परिचित हुने क्रममा थियौं। एक्कासी हात अगाडि बढाएर ‘हेल्लो, म प्रेमिका गुरुङ’ भनी।